Waddani Dhaqaale Xuma Galay Iyo Dayn By Mukhtar Cilmi
Saturday March 21, 2020 - 10:23:29 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxaan raba maanta aan iftimiyo xaalada guud ee dhaqaalyeed ee xisbiga WADDANI oo haatan marayo marxaladii ugu xumayd ,waxaana iclaaminaya in u xisbigii dhamaa u dayn ku jiro! Waxaana taas shaaciyay in u burbur dhaqaaleed dhacay hantidhawraha xassan xuseen wakhtigii shirkii golaha dhaxe Burco lagu qabtay Sheegayna gacanta waynayd ee uu ku tiirsanaa xisbigu uu ahaa qaadhaanka qurbajooga Xisbiga taageera, balse dhaqaalihii ay xisbiga ay siinjireen uu istaagay Xisbiga laga joojiyay markay arkayen sida u xisbiga u socda oo aad u liita !!!??.
Xisbigan waxa naafeeyay xubno ila haatan Ku jira oo jaqay si xad aan lahayen, waxana sii dilay xisbigan qaybta warfaafinta oo dad badane ka macaasheyn wakhtigii kaambaynkii doorashadda ,iyo madaxdii gobolada oo liqay lacagihii taageeryaasha,iyo tii muraaqibiinta oo goobo farabadan dalka laga waayay waddani muraaqibiintiisi oo laga shubtay codadkii, iyo niyad jabkii natiijadda iyo siyaasad xumada liidata ee xisbiga imika haatan oo isticmaalo,iyo koox magafayaal ah oo hataan haysata xisbiga oo ay kagaga baxsadayn xubno sida faadumo siciid ibraahin !.....waxaas udhan aya sabab u ah dhaqale xumida oo la tiicayo waddani .
Xisbiga waxa u mushahar 10 kun dollar ka qaata dawlada madaxweyne muuse biixi bil walba taas ayay koox Ku dhex cunta xafiisyadda haawanaya !!waxaana u sabab ah hogaanka xisbiga oo ka hurda oo ila haatan ka soo kicin dhulgariirkii guushii muuse biixi iyo kulmiye!!..xirsi 40 milyan bu ka samaystay muxu galiyay waddani hadi dhab ka tahay hogaaminta waddani? Basaasin Ku dhex jiray sida sheegaan ayay iska saari waayen ila hataan?!!!.waar wuxu waamaxay...
Xisbigii waddani Ku daa maanta maadaama haduu dayn galay oo wariyaasha lacagahooda lagu lahaado bal orda eega qaylada ka jirta xafiiska warfaafinta iyo sida laga cuno wariyasha xaquudooda oo juwano been been ah loo qoro!.
Ugu danbayn xisbigan dib udhis balaadhan ayu u baahan yahay ,lkn haduu sidan Ku jiro xisbi noqon maayo , iyadoo ay ka harsan tahay sanad kadib furashada xisbiyada 2021 si ay ku beegmaan doorashooyinka 2022 wakhti umu hadhin waddani wuxuuna ka bixi doona saaxadda xiligaas oo meeshisa soo gali doonaan kuwa kale !!...